Shiinaha Sax CNC samaynta oogada Furimaha Dagaalka 450CNCS Soosaarka iyo Warshad | BiGa
Sax CNC Sameynta oogada Furimaha Dagaalka 450CNCS
• Xaqiijinta saxda ah ee shaqeynaya (qaladkii 3um ee dhererka lixda tijaabo ee shiidi)
• Min. Qalabka quudinta qalabka 1 um dhammaan dhinacyada
• 3u Adoo isticmaalaya C3 darawalka kubbadda duubista darajada on dhidibka Y oo leh 3 um ku celcelin sax ah.
• Faasaska Z iyo Y waxay leeyihiin miisas toosan oo muraayad sax ah.
Qalabka caadiga ah:
Magnetic Chuck 1 kumbiyuutarada
Wheel shiidi 1 kumbiyuutar
Dharka dharka lagu riixo oo leh dheeman 1 kumbiyuutar
Gawaarida gawaarida 1 kumbuyuutar
Qalabka sanduuqa 1 kumbuyuutar
dhejinta dhejinta iyo taarikada 1 kumbuyuutar
soosaarida flange 1 kumbuyuutar
Sanduuqa qalabka oo leh qalab hagaajin ah 1 kumbuyuutar
wheel balancing arbor 1 kumbiyuutar
nidaamka qaboojinta 1 kumbuyuutar
saldhig miisaamidda gawaarida 1 kumbuyuutar
Qiyaasta toosan (1 um 2 dhidibka iskutallaabta / taagan)
Sax iyo Dejinta
Gawaarida gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'CNC control' oo leh tayada shiidaalka ugu fiican ayaa si fudud u dabooli kara shuruudahaaga.
Qaab dhismeedka mashiinka adag waa inuu hubiyo saxsanaanta waarta ee mashiinka iyo xasiloonida sare ee gobolka dib uqabashada.
Qalabka miiraha suunka warqadda birlabta
Ka fogaanshaha budada birta waxay dhaawaceysaa qaybta shaqada.
Kubadda Kubadda ee Y dhidibka
Quudin on dhidibka y waxaa wada kubbadda kubbadda ee saxsanaanta Sare oo lagu daro daboolka difaaca telescopic si loo ilaaliyo loona hubiyo nolosha adeegga ugu habboon.
Wareegga kubbadda waxaa lagu saliiday saliid xireen, ma u baahnaan doono sifayn gooni ah.
Saxan sax ah
Spindle iyo mootada (darajada V-3) dhammaantood toos ayaa loo kaxeeyaa. Spindle-ka waxaa laga sameeyaa mid sax ah oo sax ah (P4-degree) oo labalaab ah oo isku duuban si loo hubiyo qallafsanaanta iyo tayada tayada.
Spindle iyo Mootada
• Faasaska Z iyo Y waxaa wata gawaarida AC servo.
• 2HPV 3 dunmiiqa iyo mootada 2HP.V3
• Wareeg toosan oo saxan, Dhalista hore ee dunmiiqa waxay isticmaashaa darajada P4 rullaluistemadka labajibaaraha ah.
Nidaamka sifaynta otomaatiga
Waa nooc loop ah Nidaamka sifaynta otomaatiga. Saliideeyaashu si otomaatig ah ayey saliid ugu marin karaan dhammaan boolal iyo tareenada istiraatiijiga ah si ay si weyn hoos ugu dhigaan heerka xirashada tareenka slide.
Isweydaarsiga 'Cross worktable' wuxuu leeyahay nidaam wareegsan oo loo yaqaan 'hydraulic loop system'. Worktable wuxuu gaari karaa Min. Gariir marka uu ka laabto labada dhinacba. Xawaareedu waa 1 25m / min. Dib u dhiska guriga ayaa hubin kara hawlgal ammaan ah.
Sariirta sariirta hoose iyo tareenka slide
Labalaab "V" oo ku yaal dhidibka Y, a "V" iyo guri ku yaal dhidibka X oo leh saxan u adkeysanaya dharka. TURCITE, waa gacmo la xoqay iyo tareenka oo dhan waa tareen adag.
Iskuxirida sariirta salka hoose waxay ka sameysan tahay FC300 birta birta ee heerka sare ah, taasoo sii adkeyn karta waxqabadkeeda kadib daweynta daaweynta.
Xakamaynta CNC ee si fudud loo isticmaalo ayaa si toos ah u shiidaya hoose iyo dhinaca shaqada iyo giraangirta shiidan ee gawaarida si otomaatig ah u magdhow si ay si weyn ugu hagaajiso waxtarka shaqada una yareeyso qiimaha shaqada.
MAGAALADA MADASHA BADAN
Iska yaree shiidi
Isku mid ahaansho la'aan, qoto dheer taangiyada qashin qubka
Model Cutub 450CNCS
Awood Aagga Max. Wax shiidaya mm 450 × 150
Fogaanta laga bilaabo xarunta dunmiiqa ilaa miiska shaqada mm 400
Miiska shaqada Cabbirka miiska shaqada (L "W) mm 450x150
Xaxis safar mm 550
Safarka Yaxis mm 180
Qalabka T (S * N) mm * n 17x1
Quudin Miiska shaqada iskutallaab
dhaqdhaqaaq Xawaaraha Haydarooliga m / min 1-25
Gacan-ku-wareejinta halkii revo luton mm 69
dhaqdhaqaaq Buug gacmeedka Buugga halkii kacaanba mm 5
MPG gacan-qabsi elektaroonig ah MPG (miisaankiiba) (X 1 ， X 10 ， X 100) mm 0.001，0.01，0.1
Buug gacmeedka Buugga halkii kacaanba mm 5
Buug gacmeedka Buugga miisaanka mm 0.02
dhaqdhaqaaq toosan Buug gacmeedka Buugga halkii kacaanba mm 1
MPG Elewheel gacan ku dhejis ah MPG (miisaankiiba) (X 1 ， X 10 ， X 100 mm 0.001，0.01，0.1
Buug gacmeedka Buugga miisaanka mm 0.005
feed toosan Qadar kasta oo quudin ah (qallafsan / sax ah) mm 0.001-0.099
Wadarta qadarka nafaqada mm 0.001-999.999
Wadarta wadarta shiidi ganaax mm 0.001-0.099
Zero shiidi jeer 0-9
Wheel shiidi Spindle HP HP 2
Xawaaraha dunmiiqa (50Hz / 60H rpm 2850/3600
Xajmiga cabbirka xajmiga (OD * W * ID) mm 180x13 × 31.75
Gawaarida Cadaadiska saliida HP 2
Servomotor dheer W 750
Servomotor taagan W 400
Baaxadda Mashiinka (L * W * H) cm 220 × 130 × 200
Cabbirka Xirmooyinka (L * W * H) cm 200x120x220
Miisaanka Mashiinka Kg 1000
Hore: PCD100250 / PCD100300 Sax mashiinka shiidi dusha
Xiga: PCA250 Sax qiray mashiinka shiidi
PCLD100200NC / PCLD120200NC nooca-dogob hal-madaxa ...
Mashiinka Mashiinka Mashiinka CNC EDM (HD-640CNC)
650 Mashiinka xardho iyo
PCD80160 / PCD80200 qiray dusha shiidi ma ...
Taxane DK77 silig xawaare sare ku gooya mashiinka edm
PCA510 Sax mashiinka shiidi dusha
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Hal-Dhamaystiran, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Dhufto Double-End, Nooca Gawaarida Mashiinka Mashiinka, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Cagaaran, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha Sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha sare,